सरकार–विप्लव सहमतिमा कांग्रेसको प्रश्नः राज्यलाई हतियार बुझाउने बुँदा खोइ ? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं । सरकार र विप्लव सहमतिबीच भएको वार्तामा राज्यलाई हतियार बुझाउने चौंथो बुँदा खोइ ? भन्दै कांग्रेसले प्रश्न गरेको छ ।
कांग्रेसले सिंगो देशले यो प्रश्नकोे जवाफ चाहेको बताएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोइ ? सिंगो देश चाहन्छ यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ ।’
याे पनि पढ्नुस नेपालको भूमि मिँचिदा आफुलाई राष्ट्रवादी भन्ने सरकार खै ?: सांसद बडू
शुक्रबार सरकार र विप्लव समूहबीच ३ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यस्ता छन् तीन बुँदाः
कम्युनिस्ट विद्रोहका योद्धा मात्रै हैनन्, शान्तिका दूत पनि हुन्ः विप्लव
ट्याग्स: कांग्रेस, सरकार–विप्लव सहमति